Home » Education » အလိမ္မာ စာ​မှာ​ရှိ
ဘာ​စာ​ဖတ်​ရ​မှာ​လဲ။ ဘယ်​နေရာ​မှာ ဖတ်​ရ​မ​လဲ။ ဖတ်​ရ​မယ့် စာအုပ်​က ဘယ်​မှာ​လဲ။ စာ​ဖတ်​ရင် အမေ​ဆူ​မယ်။ ဆရာ​မက ဆူ​မယ်။ သူငယ်ချင်း​တွေ​က​လည်း ဂိမ်း​ကစား​ဖို့ မဲ​ဆွယ်​နေ​ကြ​တာ။ သီချင်း​က​လည်း နားထောင် ရ​ဦး​မယ်။ ကို​ရီး​ယား ဇာတ်​လမ်း​တွဲ​က​လည်း ကောင်း​ခန်း ရောက်​နေ​ပြီ။ အိန္ဒိယ​ကား​က​လည်း က​တာ​တွေ သိပ်​လှ​တာ​ပဲ။ Chatting လည်း ထိုင်​ရ​ဦး​မယ်။ နေပြည်တော်၊ ရှေ့ဆောင်​ရုံ​က 3D အက်​ရှင်​ကား​တွေ​လည်း ပြေး​ကြည့်​ရ​ဦး​မှာ။ပတ်ဝန်းကျင် တစ်​ခု​လုံး​က စာ​ဖတ်​တာ​ကို အားပေး​မယ့် သူ​တစ်​ယောက်​မှ မ​ရှိ​လို့ စာ​ဖတ်​ခြင်း​ကို ဆိုက်ရောက် သွား​စေ​မယ့် လက်တွေ့​ကျ​တဲ့ ဖြစ်​စဉ်​မျိုး​တစ်​ခု​မှ မ​ရှိ​ပါ​ဘူး။စာ(စာပေ)ဆို​တာ​ကို ကလေး​တွေ​ရဲ့ မိ​ဘတော်တော်​များ​များ သိ​ထား​တာ​က ကျောင်း​က ပြဋ္ဌာန်း​လိုက်​တဲ့ ကျောင်း​စာ​ကို​ပါ​ပဲ။ဟဲ့ စာ​ကျက်​လေ။ ဟဲ့​စာ​ကျက်​လေ ဆို​တဲ့ မိဘ​တွေ​ရဲ့ အသိ​တိမ်⁠တိမ်​နဲ့ စာ​ဖတ်​ဖို့ တိုက်တွန်း​နေ​တဲ့ အသံ​ကြားမှာ ကလေး​တွေ​ခ​မျာ စိတ်​မ​ပါ​လည်း စာ​ကျက်။ စိတ်ပါ​လည်း ကျက်။စာ​ဖတ်​ချင်​အောင် ပျိုးထောင်​ပေး​တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် လို​အပ်​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​ပတ်ဝန်းကျင် စိတ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ အားပေး​မှု​နဲ့ ရုပ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ ဖြည့်​ဆည်း ထောက်ပံ့​ပေး​မှု တို့​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ကလေး​တွေ​ဟာ နှစ်⁠နှစ်​လောက်​စ​ပြီး စိတ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ ဖွံ့ဖြိုး​စ ပြု​နေ​ပါ​ပြီ။ တီ​ဗွီ၊ ဗွီ​စီ​ဒီ​စက်​တို့​ကို ဖွင့်​တတ် ပိတ်​တတ်​ပါ​ပြီ။ သရေ​စာ တောင်းစား​တတ်​နေ​ပါ​ပြီ။ အဲ​ဒီ​အရွယ်​မှာ မိဘ​ဖတ်​နေ​တဲ့ သတင်းစာ၊ စာအုပ်​ကို လှမ်း​ဆွဲ​တတ်၊ လှန်လှော ကြည့်​တတ်​ပါ​ပြီ။ အဲ​ဒါ​ကို စာအုပ်​ပြဲ​မှာ စိုးရိမ်​တဲ့​အတွက် စာအုပ်၊ စာ​ရွက်​ကို ပြန်​လုယူ​ပြီး ကလေး မ​မီ​တဲ့​နေရာ​မှာ သိမ်းထား​တတ်​ပါ​တယ်။ဒီ​လို​အပြုအမူ​မျိုး ခဏခဏ အလုပ်​ခံ​ရ​တော့ ကလေး​က စာအုပ်​ကို မ​ကိုင်​စေ​ချင်​ဘူး​လို့ သဘောပေါက်​သွား​ပြီး အခြား​ကစား​စရာ၊ ပစ္စည်း​တွေ​ကို​ပဲ ကိုင်တွယ် ကစား​ပါ​တော့​တယ်။ ဒါ​ဟာ ပထမ​ဆုံး​စာ​ဖတ်​ခြင်း​ကို ဟန့် တား​လိုက်​တဲ့ ဖြစ်​စဉ်​ပါ။နောက် မူ​ကြို​ကျောင်း​တက်​တော့ ဆရာ​အတတ်​ပညာ တတ်မြောက်​ထား​ခြင်း​မ​ရှိ​ဘဲ တက္ကသိုလ်​ဝင်​တန်း အောင်​ခါ​စ၊ ကလေး​စိတ်​ပညာ​လည်း မတတ်၊ ကလေး​လည်း ကောင်း​ကောင်း မ​ထိန်း​တတ်၊ ကလေး​ကို​လည်း မ​ချစ်​တတ်​တဲ့ ကျူ​ရှင်​ဆရာ​မ​ဆီ မူ​ကြို စ​တက်​ပါ​တယ်။ဆရာ​မ​လေး​က​လည်း သူ​သိ​သ​လို သင်​ပါ​တယ်။ က​ကြီး၊ ခ​ခွေး​တောင် မ​ရေး​တတ်​သေး​တဲ့ ကလေး​ကို ဝါ​ကျ​တွေ သင်​နေ​ပါ​ပြီ။ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ​တောင် ဇက်​ထိ ရောက်​အောင် မ​သင်​ရ​သေး​ခင် “A-P-P-L-E အက်​ပဲလ် ပန်း​သီး” ဟု အတင်း လိုက်​ဆို​ခိုင်း​ပြန်​ပါ​ရော။ ဂဏန်း သင်္ချာ​ဘာသာ သင်​ရာ​မှာ​လည်း ၁၊၂၊ ၃၊ အရေအတွက်​တတ်​အောင် သင်​ရ​မယ့်​အချိန်​မှာ သင်ကြား​ပေး​သူ (မိဘ၊ ဆရာ​မ၊ အစ်ကို၊ အစ်မ စ​သူ​တို့​က သူ​တို့​သိ​သ​လို) “ဟဲ့ လိုက်​ဆို …. ဒါ(၁) တ​ဝမ်းပူ​ရေ စ​သတ် တစ်၊ (၂) န​ငယ် ဟ​ထိုး စ​သတ်​နှစ်” စ​တဲ့ စာလုံးပေါင်း​တွေ သင်ပေး​ပြန်​ပါ​ရော၊ စာ​သင်​တယ်​ဆို​တာ ဘာ​ခက်​တာ မှတ်​လို့​ဆို​တဲ့ သူ​တွေ​က​လည်း ရှိ​သေး။အမှန်​စင်စစ် သုတ​စာ​ဖတ်​ဖတ်၊ ရသ​စာ​ဖတ်​ဖတ်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာ​ဖတ်​ဖတ် ဖတ်​တဲ့​စာ​တိုင်း​မှာ တန်ဖိုး​ရှိ​ပါ​တယ်။ စာ​ဖတ်​သူ​ရဲ့ အဆင့်​နဲ့ စာ​ရဲ့​အဆင့် အပ်စပ်​မိ​တဲ့​အခါ စာပေ​တန်ဖိုး အထူး​မြင့်​တက်​လာ​ပါ​တယ် . . .
ဆို​တော့ စနစ်​တ​ကျ သင်​ယူ​တတ်မြောက်​မ​ထား​ဘဲ သင်​နည်း (Teaching Method, Methodology) ဆို​တာ​ကို မ​သိ​ဘဲ သင်​ချင်​သ​လို သင်ပေး​တဲ့​အတွက် ကလေး​ခ​မျာ စာ​သင်​ယူ​ရ​တာ ခက်ခဲ​ပင်ပန်း​တဲ့ အလုပ်​တစ်​ခု​လို ခံစား​သွား​ရ​ပြီး စာ​ကို ကြောက်​လာ​ပါ​တယ်။ အချို့​က ရိုက်​သင်​တယ်။ အချို့​က ဒဏ်ပေး​သင်​တယ်။ အချို့​က အော်​ငေါက် ကြိမ်းမောင်း​သင်​တယ်။ သင်​နည်း​ကို စုံ​နေ​တာ​ပါ​ပဲ။ ဒီ​လို​နဲ့ သူငယ်​တန်း စ​တက်​ရ​ပြန်​ပါ​ပြီ။ မိဘ​တွေ​က စာ​သင်​ခန်း​ထဲ​မှာ ရှိ​သ​မျှ ကလေး​အားလုံး​ထဲ​မှာ သူ့​ကလေး​သာ အဆင့်​တစ် ရ⁠ရ​မယ်​ဆို​တဲ့ (မိဘ​မေတ္တာ​လို့ ခေါ်​မ​လား။ လောဘ​လို့ ခေါ်​မ​လား။ အမြော်အမြင် နည်း​တယ် ခေါ်​မ​လား) ရည်​မှန်း​ချက် ကြီး⁠ကြီး​နဲ့ ကျောင်း​ထား​ပါ​တယ်။
မိမိ​ကလေး​ရဲ့ ဥာဏ်​ရည် ထက်​သလား၊ ထုံ​သလား၊ အေးအေး​ဆေး​ဆေး ဖြည်း⁠ဖြည်း​မှန်​မှန် သမား​လား။ ထို့​အတူ မိမိ(မိဘ)ကိုယ်တိုင်​ရော၊ ကျောင်း​စာ​မှာ လျှမ်း⁠လျှမ်း​တောက် ထူးချွန်​ခဲ့​လို့​လား။ ကိုယ်​ကိုယ်တိုင် မ​ထူးချွန်​ခဲ့​ဘဲ ကိုယ့်​ကလေး​ကျ​မှ ဆရာဝန်​ကြီး ဖြစ်​ရ​မယ်။ အင်​ဂျင်​နီ​ယာ​ကြီး ဖြစ်​ရ​မယ်။ စစ်ဗိုလ်​ကြီး ဖြစ်​ရ​မယ်​ဆို​တဲ့ ကြီးကျယ်​တဲ့ စကားလုံး​တွေ​နဲ့ ရည်​မှန်း​လာ​ကြ​တာ။ လူ​အတော်​များ⁠များ​ဟာ ကိုယ်​သာ မ​လုပ်​တတ် မ​ကိုင်​တတ်​တာ။ သူ​များ​ဆို အတော်​မြှောက်​ပေး ချင်​ကြ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​စိတ်​တွေ​ကြောင့် ကလေး​တွေ​ခ​မျာ မ​နိုင်​ဝန်​ထမ်း နေ​ကြ​ရ​ပါ​တယ်။
မိဘ​ရည်​မှန်း​ချက် ကြီး​ကြီးမား​မား လှိုင်း​လုံး​အောက်​မှာ ကလေး​သမ္ဗန်​လေး​ခ​မျာ လူး​ကာ​လိမ့်​ကာ​နဲ့ မ​တည်​မ​ငြိမ် မျော​ရ​ပြန်​ပါ​တယ်။ သူငယ်​တန်း​ပေ​မယ့် ကျူ​ရှင်​ယူ​ရ ပြန်​ပါ​တယ်။ ကျူ​ရှင်​က တစ်​ခု​တည်း မဟုတ်​သေး​ဘူး။ ကျက်​စာ​ကျူ​ရှင်၊ သင်္ချာ​ကျူ​ရှင်၊ အင်္ဂလိပ်​စာ​ကျူ​ရှင်။မနက် ၅ နာရီ​ခွဲ​အိပ်ရာ​မှ အတင်း​နှိုး​တာ​ခံ​ရ။ အတင်း​အပေါ့​သွား​ခိုင်း။ အိပ်​သာ​တက်​ခိုင်း။ ဗိုက်​မ​ဆာ​ဘဲ မနက်​စာ​အတင်း​ကျွေး​လို့ ကြိတ်​မှိတ်​စား​ရ၊ ကျောင်း​တက်​ရ​တာ စိတ်​မ​ဝင်စား​နိုင်​တော့​ပါ​ဘူး။ကျောင်း​က ပြန်​ရောက်​တော့ ကမန်းကတန်း ထမင်းစား​ပြီး ကျူ​ရှင်​ဆရာ​မ​ဆီ​သွား စာ​သင်​ရ​ပြန်​ရော။ ဆရာ​မက​လည်း မိဘ​ဆီ​က မျက်နှာရ​ဖို့၊ အငြို​ငြင်​မ​ခံ​ရ​ဖို့ ကလေး​ကို အတင်း​စာ​တွေ​မေး၊ စာ​တွေ ကျက်​ခိုင်း၊ ပြန်ဆို​ခိုင်း​နဲ့ ကလေး ထိုင်​ငို​ချင်​စိတ်​တွေ မ​ကြာ​ခဏ ပေါက်⁠ပေါက်​လာ​ပါ​တယ်။ထိုင်​ငို​လိုက်​လို့ သနား​ပြီး ချော့​မ​လား မှတ်​ရ​တယ်။ စာမ​သင်​ချင်​လို့ အပျင်း​ထူ​လို့ ငို​တာ​ဆို​ပြိး အရိုက်​ခံ​ရ​ပြန်​ပါ​တယ်။ စာဆို​တာ ကြောက်​စရာ​လို့ ကလေး​ခ​မျာ ငယ်​စဉ်​ကတည်းက မှတ်ယူ​သွား​ပါ​တယ်။
ကျောင်း​စာ​ချည်း ဖတ်​ရ​တာ ငြီးငွေ့​လာ​လို့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း​တစ်​ယောက်​ဆီ​က ဝတ္ထု​တစ်​အုပ်​တ​လေ ငှားရမ်း​ဖတ်​မိ​ပါ​တယ်။ အမေ​တွေ့​သွား​ပြီး စာအုပ်​ကို ဆွဲ​လွှင့်​ပစ်​ပါ​တယ်။ အရမ်း​ကြီး​လည်း ဆူ​ပါ​တယ်။ ဗိုက်​ခေါက်​လည်း လိမ်​ဆွဲ​ပါ​တယ်။”ဒီ​လို​စာ​တွေ နင်​ဖတ်​စရာ​လား…” တဲ့ ဒီ​လို​စာ​တွေ မ​ဖတ်​ရင် ဘယ်​လို​စာ​တွေ ဖတ်​ရ​မယ်​လို့ အမေ​ဘာ​မှ ညွှန်​မ​ပြ​ပါ​ဘူး။ နောက်ဆုံး ကျောင်း​စာ​နဲ့​ပဲ လုံးထွေး အချိန်ကုန်​ရ​ပါ​တယ်။ ဒီ​လို​မျိုး စိတ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ အားပေး​မှု​မ​ရှိ​တဲ့ အခြေအနေ​မှာ ကလေး​ဟာ ဘယ်​လို​လုပ် စာ​ဖတ်​ချင်​စိတ် ပေါ်ပေါက်​နိုင်​မှာ​လဲ။ဆို​တော့ ကလေး​များ စာ​ဖတ်​ချင်​အောင် အနီး​ကပ် အားပေး​ရ​မယ့်​သူ​က မိဘ​နှစ်​ပါး ဖြစ်​ပါ​တယ်။ မိဘ​ကိုယ်တိုင် စာ​ဖတ်​ရ​ပါ​မယ်။ စာ​ဖတ်​ဖို့ အချိန်​မ​ရ​ဘူး​ဆို​လည်း ကလေး​တွေ စာ​ဖတ်​အောင် တိုက်တွန်း လမ်း​ညွှန် အားပေး​ရ​ပါ​မယ်။ ကျောင်း​စာ​အပြင်၊ ပြင်​ပ​စာ​ဖတ်​တာ​ကို မ​ဟန့်​တား​ရ​ပါ​ဘူး။
ရုပ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ အားပေး​မှု​က မိဘ​နှစ်​ပါး​တည်း​နဲ့ မ​လုံလောက်​ပါ​ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်​ခု​လုံး​က ဝိုင်းဝန်း​အားပေး​ရ​မှာ​ပါ။ မိဘ​က ကလေး​အတွက် သင့်တော်​တဲ့ ဖတ်​သင့်​တဲ့ စာအုပ်​တွေ ဝယ်​ယူ​ပြီး လက်ဆောင်​ပေး​ရ​ပါ​မယ်။ကျောင်း​မှာ စာကြည့်​တိုက်​တွေ ဖွဲ့​ထား​ရ​ပါ​မယ်။ ဆရာ​တွေ ကိုယ်တိုင်​လည်း စာ​ဖတ်​ရ​မှာ​ဖြစ်​သ​လို ကလေး​တွေ စာ​ဖတ်​အောင် လမ်း​ညွှန်​ပေး​ရ​ပါ​မယ်။ ဆရာ​ကိုယ်တိုင် (သို့) စာကြည့်​တိုက်​မှူး​က စာကြည့်​တိုက်​မှ စာအုပ်​တစ်​အုပ်​ကို ဖတ်​ပြီး ဘယ်​လို​ခံစား​ရ​ကြောင်း ပြန်ပြော​ပြ​ပြီး ကလေး​တွေ ဖတ်​ချင်​အောင် စည်း​ရုံး​ရ​ပါ​မယ်။ ပြီး အဲ​ဒီ​စာအုပ်​ကို အိမ်​သို့ ငှားရမ်း​ခွင့်​ပြု​ရ​ပါ​မယ်။ စာကြည့်​တိုက် အသင်းဝင်​တတ်​တဲ့ အလေ့​အထ အတော်​လေး ပျောက်​ကွယ်​နေ​ပါ​ပြီ။ စာကြည့်​တိုက် ဗီရို​ထဲ​မှာ သိမ်းဆည်း​ထား​တဲ့ စာအုပ်​တွေ​ကို ကလေး​တွေ မြင်သာ​အောင်၊ ဖတ်​ချင်​လာ​အောင် စီစဉ်​ထား​ရ​ပါ​မယ်။ စာအုပ်​ပြဲ​မှာ၊ ဆုတ်​မှာ၊ ပျောက်​မှာ မ​စိုးရိမ်​ပါ​နဲ့။ ကလေး​တွေ​ဖတ်​လို့ စာအုပ်​ပြဲ​သွား​တာ​ထက် ဘယ်​သူ​မှ မ​ဖတ်​ရ​ဘဲ အသစ်​အတိုင်း ဗီရို​ထဲ​မှာ သိမ်းထား​တာ​က ပို​လို့ ဆုံးရှုံး​စေ​ပါ​တယ်။
နိုင်​ငံတော် အစိုးရ​ပိုင်း​က​လည်း ရပ်​ကွက်​ကျေးရွာ​မ​ကျန် ကိုယ်​ပိုင်​စာကြည့်​တိုက်​တွေ ဖွင့်​ဖို့ အားပေး​ကူညီ​ရ​ပါ​မယ်။ လက်​ရှိ ပြန်ကြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာန​က ဖွင့်​လှစ်​ထား​တဲ့ စာကြည့်​တိုက်​တွေ​ဟာ ပြည်​သူ​တွေ​နဲ့ ကင်းကွာ​နေ​ပါ​တယ်။ ဟိတ်​ကြီး​ဟန်ကြီး ရှိ​လှ​ပြီး ရုံး​ဆန်​နေ​တာ တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။အစိုးရ​ရဲ့ မူ​ဝါဒ​တွေ ဖြန့်ချိ​တဲ့ ဌာန​မှန်း ပြည်​သူ​များ​က သိရှိ​နေ​ပါ​တယ်။ ဆို​တော့ ပုဂ္ဂလိက စာကြည့်​တိုက်​တွေ ဖွံ့ဖြိုး​ဖို့​လို​ပါ​တယ်။ စာကြည့်​တိုက်​ဟာ လွတ်လပ်​ရ​ပါ​မယ်။ စာ​ဖတ်​သူ​စိတ်​ကြိုက် စာအုပ်​စာပေ လွယ်​လွယ်ကူ​ကူ ရ​နိုင်​ရ​ပါ​မယ်။
လူ​ဆို​တာ မျှော်လင့်​ချက်​နဲ့ အသက်​ရှင်​တာ​ပါ။ မျှော်လင့်​ချက်​မဲ့၊ အနာဂတ်​မ​ရှိ​တဲ့ အလုပ်​ဆို အကျိုး​မ​ရှိ​လေ​တော့ ဘယ်​သူ​က​မှ အဲ​လို​မျိုး​အလုပ်​ကို မ​လုပ်​ချင်​ပါ​ဘူး။
စာ​ဖတ်​ရင် ဘာ​ရ​မ​လဲ။ ဘာ​ဖြစ်​မ​လဲ။ ဘယ်​လို​အကျိုး​ရှိ​မ​လဲ။ ဒါ​တွေ​ကို​သိ​မှ စာ​ဖတ်​ချင်​ကြ​မှာ​ပါ။
စင်စစ်​ကျောင်း​စာ​က လူ့​ဘဝ​ကို ထိုက်ထိုက်​တန်​တန် အကျိုး​မ​ပေး​တာ​ကို ကလေး​တွေ တွေ့​ကြုံ​နေ​ပါ​ပြီ။ တက္ကသိုလ်​ဝင်​တန်း​အောင်​လို့ တက္ကသိုလ်​ဝင်​တန်း​နဲ့ တန်​တဲ့ အသက်မွေး​ဝမ်း​ကျောင်း၊ ဘဝ​ရပ်​တည်​ရေး အခြေအနေ ဘာ​မှ​မ​ရ​ခဲ့​ပါ​ဘူး။ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့​တစ်​ခု​ရ​လို့ ဘွဲ့​နဲ့​တိုက်ရိုက် ဘာ​မှ​လုပ်​စား​လို့ မ​ရ​ပါ​ဘူး။ စိတ်​ပညာ​နဲ့ ဘွဲ့​ရ​ပေ​မယ့် အီ​လက်​ထ​ရွန်​နစ်​ဆိုင်​က အရောင်း​စာရေး ဖြစ်​ချင်​ဖြစ်​နေ​တာ​ပါ။ ဓာတုဗေဒ​နဲ့ ဘွဲ့​ရ​လို့ ဓာတုဗေဒ​နဲ့ ပတ်သက်​တဲ့​အလုပ် ဘာ​လုပ်​ရ​မှန်း မ​သိ​ပါ။ ကုန်​ဈေး​တန်း​က ဆိုး​ဆေး​ဆိုင် ပိုင်​ရှင်​တွေ​က ဓာတုဗေဒ ဘွဲ့​ရ​သူ​တွေ တစ်​ယောက်​မှ မ​ပါ⁠ပါ​ဘူး။
ဆိုလို​ချင်​တာ​က ကျောင်း​စာ​ကို စာ (ပေ) လို့ သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်​တွေ​က ‘စာတတ်​တော့​ရော ဘာ​လုပ်​စား​ရ​မှာ​လဲ’ ဆို​တဲ့ အငေါ်​တူး စကား​နဲ့ တုံ့​ပြန်​ကြ​ပါ​တယ်။ သခင်​ကိုယ်တော်​မှိုင်း တက္ကသိုလ်​က ဘာ​ဘွဲ့ မှ မ​ရ​ပေ​မယ့် သူ့​ကို စာပေ​ပညာရှိ​လို့ သတ်​မှတ်​ကြ​ပါ​တယ်။ အမေ​ရိ​ကန် သမ္မတ အီ​ဘ​ရာ​ဟင်​လင်​ကွန်း​လည်း ဘွဲ့​ရ​သူ မဟုတ်​ပါ။စာပေ​ဆို​တာ ကျောင်း​စာ​တစ်​ခု​တည်း ဆိုလို​တာ မဟုတ်​ဘူး​ဆို​တာ မိဘ​များ ကိုယ်တိုင် သဘောပေါက်​ရ​ပါ​မယ်။
အမှန်​စင်စစ် သုတ​စာ​ဖတ်​ဖတ်၊ ရသ စာ​ဖတ်​ဖတ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာ​ဖတ်​ဖတ်၊ ဖတ်​တဲ့ စာ​တိုင်း​မှာ တန်ဖိုး​ရှိ​ပါ​တယ်။ စာ​ဖတ်​သူ​ရဲ့ အဆင့်​နဲ့ စာ​ရဲ့​အဆင့် အပ်စပ်​မိ​တဲ့​အခါ စာပေ​တန်ဖိုး အထူး​မြင့်​တက်​လာ​ပါ​တယ်။
ရန်ကုန်​မှာ နေ​ရ​သူ​က စင်​ကာ​ပူ​နိုင်ငံ​အကြောင်း သိ​ချင်​ရင် စာပေ​မှ သိ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ရာ​ဘင်​ဒြာ​နတ်​တ​ဂိုး​အကြောင်း သိ​ချင်​ရင် စာပေ​မှ သိ​နိုင်​ပါ​တယ်။ အမေ့​မေတ္တာ​အကြောင်း သိ​ချင်​ရင် စာပေ​မှ သိ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဘာ​သိ​ချင်​လဲ သိ​ချင်​တာ​မှန်​သ​မျှ စာပေ​မှ သိ​နိုင်​ပါ​တယ်။
ကလေး​တွေ သိ​ချင်​စိတ် ရှိ​လာ​ဖို့ လို​ပါ​တယ်။ ကလေး​တွေ​က သိ​ချင်​အောင်၊ သိ​မှ အကျိုး​ရှိ​မှာ​ကို သဘောပေါက်​အောင် နိုင်​ငံတော် (အစိုးရ)၊ စာပေ​မီ​ဒီ​ယာ၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ ကျောင်း၊ ရပ်​ကွက်​စာကြည့်​တိုက်​များ​မှ ဝိုင်းဝန်း အားပေး​ကူညီ နည်း​လမ်း​ရှာ​ပေး​ကြ​ဖို့ လို​ပါ​တယ်။
ကလေး​တွေ​ကို​ချည်း လက်ညှိုးထိုး​ကာ အတင်း​စာ​ဖတ်​ခိုင်း​လို့ မ​ရ​ပါ​ဘူး။ ကျောင်း​စာ​ဟာ ကန့်သတ်​ချက်​ရှိ​တဲ့ စာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ပြင်​ပ​စာ​က​သာ ကန့်သတ်​ချက်​မဲ့ စာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကမ္ဘာ​ပတ်​ချင် စာတတ်​ချင်​ရင် ကန့်သတ်​ချက် မ​ရှိ​တဲ့ စာ​စုံ​ကို ဖတ်​ခွင့်​ပြု​ကြ​ဖို့။ ဒါ့​အပြင် စာ​ကို အတင်း​ဖတ်​ခိုင်း​တာ​ထက် စာ​ဖတ်​အောင် နည်း​လမ်း​ရှာ​ပေး​တာ​က ပို​ပဓာန​ကျ​ကြောင်း အကြံ​ပြု ရေးသား​အပ်​ပါ​တယ်။
Credit to Eleven
Epiphone DR-100 Sunburst (1 views)
Zoom g3 multi-effect (1 views)
ကို​စိုင်း (အခြေ​ခံ​ဂစ်​တာ​တီး​ခတ်​နည်း) (1 views)
Lexus CT Year 2012 Oct Model (1 views)
Honda Fit Year 2007 Oct Model (1 views)
Brand New Nexus5(1 views)
Zoom g3 multi-effect (196712 views)
Zoom A3 (Accoustic Multi-effect DI) (160965 views)
T.C Electronic G Natural( Accoustic Multi Effect) (160455 views)
Epiphone DR-100 Sunburst (158969 views)
Lexus ＧＳ　Year 2006 March Model (136680 views)
Eleven Rack guitar/audio interface (132307 views)
LAG Guitars (T66DCE) (132210 views)
DoremiCafe (132121 views)
Boss AD-8 (Acoustic Guitar Processor) (130710 views)
BOSS GT-100 (125850 views)